ရန်ကုန်က မြို့နယ်တော်တော်များများမှာ ချလိုက်တဲ့ Lockdown ကို နားမလည်သူများအတွက် - Zet Star
ရန်ကုန်က မြို့နယ်တော်တော်များများမှာ ချလိုက်တဲ့ Lockdown ကို နားမလည်သူများအတွက်
မြန်မာပြည်က Lockdown ဆိုသည်မှာ…
” အန်တီ… အခု ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကို lock down ချလိုက်တယ် တဲ့ ။ အဲ့ဒါ အန်တီ သိလား? ” ” အင်း.. သိတယ်လေ..” ” အဲ့ဒါ.. ဘယ်လို ကြေငြာချက်ကြီးလဲဗျ ။ သူတို့ ကြေညာတဲ့ပုံစံကို ကျနော် သိပ်နားမလည်လို့..”
” အေ.. အဲဒီကိစ္စကို..လူတော်တော်များများ နားမလည်ကြဘူး..” ” ဟုတ်တယ် အန်တီရ။ သူတို့ကြေညာချက်က ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုကြီး ဖြစ်နေတယ် ” ” ဒီမှာ.. အန်တီ.. ရှင်းပြမယ် ” ” ဟုတ်.. အန်တီ..”
” ဒီလိုကွာ… မင်းတို့လို လူပိန်းလေးတွေ.. နားလည်အောင် ပြောရမယ် ဆိုရင်ပေါ့..” ” ငှယ် ” ” အိမ်တစ်အိမ်ကို တိုင်းပြည်တစ်ခုလို့ မှတ်လိုက်ကွာ..” ” ဟုတ် ” ” အေး.. အဲ့သည့်အိမ်မှာ မိသားစု ၅ ယောက် ရှိတယ်ပေါ့ကွာ..” ” ဟုတ်ကဲ့..” ” ကဲ.. အဲ့အိမ်ကို ခုနက မင်းပြောတဲ့ ကြေညာချက်နဲ့အညီ lock down ချလိုက်ပြီကွာ ” ” ဟုတ် အန်တီ ။ နည်းနည်းတော့ မျက်စိထဲ မြင်လာပြီ ”
” အေ.. အဲ့မှာ အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားက ဦးဝင်းမြင့် ဆိုပါတော့ ။ သူက အစိုးရဝန်ထမ်း..။ ဒီတော့.သူက lock down ထဲမှာ မပါဘူး ။ သူက ရုံးကို သွားကို သွားရမယ် ” ” ဟုတ်ကဲ့.. အန်တီ ” ” နောက်တစ်ယောက်က ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ သား ။ သူက ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း ။ ဒီတော့..သူလည်း lock down ထဲမှာ မပါဘူး ။ မဖြစ်မနေ ကုမ္ပဏီဆီ သွားကိုသွားရမယ် ” ” ဟုတ် ဟုတ် အန်တီ။ နည်းနည်းတော့ ရှင်းလာပြီ ”
” အဲ.. နောက်တစ်ယောက်က.. သမီး ။ သူက စက်ရုံ ဆင်းတာ ” ” အမ်… ဒါဆို.. သူ သူလည်း..” ” ဟုတ်တယ်.. သူလည်း lock down ထဲမှာ မပါဘူး..” ” ဟောဗျာ.. သုံးယောက် ရှိသွားပြီနော်..”
” အွန်း.. နိုးနိုး… မပြီးသေးဘူး ကျန်သေးတယ် ။ နောက်တစ်ယောက်က.. ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့အဖေ ။ သူက လေဖြတ်နေတာ ။ ကျန်းမာရေးကိစ္စ။ အချိန်မရွေး ဆေးရုံဆေးခန်း သွားလို့ ရတယ် ။ ဒီတော့.. သူလည်း lock down ထဲမှာ မပါဘူး ”
” ဟာ.. ဒါ ဒါဆို.. တစ်ယောက်တည်း ကျန်တော့တာပေါ့ အန်တီရ ” ” အေး.. သူက ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့မိန်းမ ” ” lock down ထဲ ပါပြီပေါ့.” ” ဘယ်ကလာ.. သူက အရေးအကြီးဆုံး.. အိမ်တစ်အိမ်လုံး စားဖိုးသောက်ဖို့ကို တာဝန်ယူထားရတာ..” ” ဟောဗျာ” ” ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့ စျေးသွားရမယ်လေ.. ဟုတ်တယ်မလား ” ” ဟင်.. ဒါဆို.. သူလည်း..” ” မပါဘူးလေ.. သူ့ကိုလည်း lock down ထဲ ထည့်လို့ဘယ်ရမလဲ ”
” ဟာဗျာ.. အဲ့ဒါဆို.. အကုန် ထွက်လို့ရနေတာပဲဟာ ။ ဘယ်သူ့ကို.. lock down ချတာလဲ အန်တီရ”
ထိုအခါ အန်တီက.. သောက်လက်စဖက်ကြမ်းဆေးလိပ်ကို ပြာခွက်ထဲထိုးချေလိုက်ရင်းက ” ဘယ်သူ့ကို ချရမလဲဟဲ့… အိမ်ကိုလေ. အိမ်ကို ချတာပေါ့ မသာလေးရဲ့…
← တရုတ် တိုက်လေယာဥ် တစင်း ပျက်ကျ၊ မိမိတို့ ပစ်ချခြင်း မဟုတ်ဟု ထိုင်ဝမ်ငြင်းဆို
ပေါက်ဖော်ကြီးတွေက ‌ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်စေချင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း →